ခရစ္စတလ်ရဲ့ ဘဝစာမျက်နှာ ...။: December 2011
ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ရတနာ ဖြစ်ပါစေ..
(ဒီဇင်ဘာလ ၃၀-ရက်နေ့မှာ ရောက်လာတဲ့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းလည်းဖြစ် အဖိုးတန်တရားတစ်ပိုဒ်လည်းဖြစ်လို့ ခင်မင်ရသော ဘလော့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် ပိုစ့်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်-ခရစ္စတလ်)
ဦးဇင်း စာရေးလိုက်ပါတယ်။ နှစ်သစ်ကူးတော့မယ်ဆိုတော့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းလေး ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်ဆို ထိုင်းမှာ ပီမိုင်ပွဲတော်ဆိုပြီး ကျင်းပကြတာကိုလဲ သတိရနေမိတယ်။ အရင်နှစ်က နှစ်သစ်ကူး တရားတွေ ဟောခဲ့ရတာကိုလဲ သတိရမိသေးတယ်လေ..
၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတော့ ကုန်တော့မယ်နော်။ လောကမှာ ထုံးစံအတိုင်း တနှစ်မှာ တစ်ခါ နှစ်သစ်ကူးဆိုတာ လုပ်ကြပါတယ်။ Happy New Year to You! ပေါ့။ Globalization ခေတ်ဆိုတော့ ကမ္ဘာသုံး (A.D anno domini) ခရစ်နှစ်နဲ့ အလုပ်များကြပါတယ်။ မြန်မာတွေက မြန်မာ(Myanmar Era)နှစ်နဲ့လဲ လုပ်ကြတယ်။ တချို့ တရုပ်နွယ်ဖွား မြန်မာများဆိုရင် မြန်မာနှစ်လို Happy New Year၊ ခရစ်နှစ်လိုလဲ Happy New Year ၊ တရုပ်နှစ်လိုလဲ Happy New Year ဆိုပြီး လုပ်ကြသေးတယ်။ ကမ္ဘာမှာ လူမျိုးနွယ်ပေါင်းကလဲ လူမျိုးပေါင်း ၃၆၅ မျိုးမက ရှိနေပါတယ်။ ရှိနေသမျှ လူမျိုးပေါင်းတို့အလိုအရ Happy New Year လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လဲ နေ့တိုင်း အချိန်တိုင်း Happy New Year ဖြစ်နေတော့မှာပါပဲ။
Happy New Year-ကို စိစစ်ကြည့်တော့ တစ်နှစ်မှတစ်နှစ် ရုပ်နာမ်တရားတွေ ပြောင်းလဲသွားတာပါပဲ။ အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာတာပေါ့။ တကယ်ပြောင်းလဲလာတာက ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေပါ။ မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်တွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေဟာ စက္ကန့်မလပ် အမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ်တွင်းက ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေ စက္ကန့်မလပ် ပြောင်းလဲနေတာကိုတော့ ဝိပဿနာအသိဥာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်ချင်ရင် “ဖြစ်ပျက်”လို့ ရွတ်ဆိုနေရုံနဲ့တော့ မြင်ရမည် မဟုတ်ပါ။ ပစ္စုပ္ပန်အခိုက်အတန့်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ရုပ်နာမ်တရားတွေကို ရှုမှတ်နေမှာသာ တကယ့်ရုပ်နာမ်တရားတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်တရား နာမ်တရားတွေရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲ မမြဲတာကို မြင်နေရပြီဆိုရင် အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာ ထင်ရှားလာမယ်။ ဖြစ်ခြင်း ပျက်ခြင်းတို့ဖြင့် အမြဲနှိပ်စက်ခံနေတဲ့အတွက် ဒုက္ခလက္ခဏာလဲ ထင်ရှားလာမယ်။ ဒီလို မမြဲတာ ဒီလို ဆင်းရဲတာဟာ ကိုယ်ဖြစ်လို့ ဖြစ်ရတာ မဟုတ်ပဲ အစိုးမပိုင်လို့သာ ဖြစ်ရတာဆိုတဲ့ အနတ္တလက္ခဏာလဲ ထင်ရှားလာပါမယ်။ လက္ခဏာရေး သုံးပါးလုံး ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။ “အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ” လို့ ရွတ်ဆိုနေရုံမျှနဲ့တော့ လက္ခဏာရေးသုံးပါးက ထင်ရှားလာမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် လက္ခဏာရေးသုံးပါး ထင်ရှားဖို့အတွက် ဖြစ်ပျက် ဖြစ်ပျက်လို့ အမြှုတ်ထွက်အောင် ရွတ်ဆိုနေဖို့ မလိုသလို အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ လို့ ရွတ်ဆိုနေဖို့လဲ မလိုအပ်ပါဘူး။ တကယ်လုပ်ရမည်က ဖြစ်ခိုက်ရုပ်နာမ် ပစ္စပ္ပန်တရားတွေကိုသာ ရှုမှတ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ Happy New Year-ကို အကြောင်းပြုပြီး ရုပ်နာမ်တရားတွေရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲ မမြဲတာကိုလဲ သတိထားကြည့်သင့်ပါတယ်။
တစ်နှစ်တစ်ခါ နှစ်သစ်ဟာ လူ့မှာခေါ်ရိုးရှိ။
တကယ်ပြောင်းတာ ရုပ်နာမ်ပါ ခန္ဓာမမြဲသိ။
ရုပ်နာမ်ဓမ္မ မမြဲကြ ခဏခဏပြောင်းနေ၏။
Happy New Year ကို အကြောင်းပြုပြီး ရုပ်နာမ်တရားတွေရဲ့ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲ မမြဲတာကို သမာဓိသိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့ သမ္မာဝါယာမ သမ္မာသတိ သမ္မာသမာဓိတို့ဖြင့် သတိထားရှုမှတ်နေသူမှာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မာသင်္ကပ္ပ ဟူသော ပညာသိက္ခာတို့ ထက်မြက်နေပါတယ်။
သမ္မာဝါစာ သမ္မာကမ္မန္တ သမ္မာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ သီလသိက္ခာတို့လဲ ဖြူစင်သထက် ဖြူစင်လာပါတယ်။ ထိုကြောင့် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟူသော သိက္ခာသုံးပါး အကျင့်တရားတို့ အားကောင်းသထက် ကောင်းလာပါတယ်။
နှစ်ကုန်လာလို့ အသက်သာ တစ်နှစ်ကြီးလာပြီး သိက္ခာတရား ကြီးမလာသတို့မှာ အကုန်ကြောက်နေရပါတယ်။ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ သိက္ခာတရားဘာမျှ မရရှိပဲ ချိန်ခွင်လျာ မညီသူတို့မှာ အမြဲတမ်းလို့ ကြောက်လန့်ထိပ်လန့်နေရပါတယ်။ လူလောကမှာ အကျင့်သိက္ခာ ကြီးမလာပဲ အသက်သာကြီးလာပြီး အိုမင်းလာသည့်အခါ ဘာမျှအသုံးမကျသည့်အတွက် ဝိုင်းပယ်ခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မယ်။ အိုပယ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လူလောကမှာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနဲလာခါ အသက်စသည် အမေးခံရသောအခါ မကျေနပ်ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ခေတ်သစ်လောကနီတိက… “မိန်းကလေးဆို အသက်မမေးရ၊ လခစားဆို လခ မမေးရ၊ ဘုန်းကြီးဆို ဝါမမေးရ၊ စိတ်ဆိုးတတ်ကြသည်”တဲ့။
အသက် သိက္ခာ၊ ကြီးစရာ၊ လူမှာနှစ်မျိုးရှိ။
အသက်ကြီးရုံ၊ အားမစုံ၊ အကုန်ကြောက်ရ၏။
အသိမကြွယ်၊ အကျင့်ကွယ်၊ အိုပယ်ဖြစ်သွား၏။
အသက်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟူသော သိက္ခာသုံးပါး အကျင့်တရားတို့ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် ကြီးမားလာသူတို့မှာ အမှန်ပင် စိတ်အေးရပါတယ်။ ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်များကို အကျိုးရှိရှိ ကုန်ဆုံးခဲ့ရလို့ ပြန်တွေးတိုင်း ပူပင်မှုမရှိပဲ ကျေနပ်နှစ်သက်မှုသာ ဖြစ်ရပါတယ်။ သိက္ခာသုံးပါး အကျင့်တရားတွေ မြင့်မားလာသည့်အတွက် သိက္ခာသုံးပါးတည်းဟူသော တကယ်အလှတရားဖြင့် ပြည့်ဝနေသည့်အတွက် ကြီးလေလှလေ ဖြစ်ခါ လူအများကလဲ ချစ်လို့မဝ ကြည်ညိုလို့မဝ ဖူးလို့မဝ ဖြစ်ရပေတယ်။ ထိုကဲ့သို့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးဟူသော သိက္ခာသုံးပါး အကျင့်တရားတို့ဖြင့် ပြည့်လျမ်းနေသော Happy New Year မျိုးဟာ တကယ့် ရတနာထိုက်တဲ့ “Happy New Year နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ရတနာ’’ လို့ ခေါ်ဆိုထိုက်ပါပေတယ်။
အကျင့်သိက္ခာ၊ ကြီးမှသာ၊ မှန်စွာစိတ်အေး၏။
ကြီးလေလှလေ၊ အေးမြပေ၊ လူတွေချစ်ကြ၏။
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ၊ ရတနာ၊ ကောင်းစွာရအောင်ဖြည့်။
Happy New Year to You! လို့ ဆိုလိုက်ရင် နှစ်သစ်ဆုတောင်းဆိုတာ လူတိုင်းနီးပါး သိကြပါတယ်။ (သင့်အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ) လို့ ဆိုလိုတာပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဆုတောင်းလေးတော့ သတိထားမိသူ နည်းမယ် ထင်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ Happy New Year to You! ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းထက် ပိုပြီးလေးနက်ကာ အဓိပ္ပါယ် ပြည့်ဝတဲ့ ဆုတောင်းလေးရှိပါတယ်။ ဆုတောင်းလဲ ပေးကြတယ်လေ၊ ဗုဒ္ဓသာသာက ဆုတောင်းပေးနေကြ မွေးနေ့ဆုတောင်းဖြင့် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်..
ဘဝတု သဗ္ဗမင်္ဂလံ၊ ရက္ခန္တု သဗ္ဗဒေဝတာ။
ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာမှန်သမျှ ဖြစ်ပါစေ၊ ခပ်သိမ်းသော နတ်အများက စောင့်ရှောက်ကြပါစေ၊ အလုံးစုံသောဘုရားရှင်တို့၏ တန်ခိုးအာနုဘော်ကြောင့်၎င်း အလုံးစုံသော တရားတော်တို့၏ အစွမ်းအာနုဘော်ကြောင့်၎င်း အလုံးစုံသော သံဃာတော်တို့၏ အစွမ်းအာနုဘော်ကြောင့်၎င်း သတ္တဝါအားလုံးတို့ အခါခပ်သိမ်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။
May there be all blessings!
May all deities give protection!
By the power of all Buddhas, Dhammas and Samghas, may you be happy!
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ရတနာဖြစ်၍ ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာနှင့် ဘေးရန်အမျို:မျို:တို့မှ ကင်းလွတ်ကာ ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒ ပြည့်ဝပြီးလျှင် အမျိုး ဘာသာ သာသနာတော်အကျိုး ဆထက်တိုးလို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သရင်း...
အခန်း နံပါတ် (၂၀၆)၊ ဆရာဆောင်
ဖုန်း ၀၉ ၇၃၁ ၅၅၀ ၆၁
Posted by Crystal at 9:42 PM9comments
ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် Tag ဒီပိုစ့်လေးမှာ ကျမနာမည်ကို ထည့်ပြီး တဂ်လုပ်တာက တစ်ကြောင်း၊ ရေးချင်စဖွယ်လေး ဖြစ်နေတာက တစ်ကြောင်းမို့ ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ရေးလိုက်ပါတယ်၊
ဒီနေ့ ချိန်းထားတဲ့သူကို စောင့်ရင်း ပိုစ့်ရေးလိုက်တာ ပိုစ့်သာပြီးသွားရော ချိန်းထားတဲ့သူက ပေါ်မလားဘူး။ ဒါနဲ့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်ကို ခပ်သော့သော့ ချရေးဖြစ်ပါတယ်။ ရေးပြီးတာတော့ တဂ်ခံရတဲ့နေကတည်းပါပဲ၊ Christmas Eve ကို နှုတ်ဆက်ချင်တာမို့ ဒီနေ့မှ တင်လိုက်ပါတယ် :P
->ခရစ်စမတ် ပါတီပွဲတွေ ဖိတ်ရင် လက်ဆောင်တွေပေးရတော့မှာမို့ ပိုက်ပိုက်ကုန်တော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေပြီ။
->နှင်းတွေခဲတဲ့နေရာလား စိတ်တောင် မကူးဘူး။ များက ချမ်းတတ်ပါဘိသနဲ့။
->အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ကွေးနေရတဲ့အရသာလောက် ဘာမှ မမက်ပါဘူးလေ :P
->ဟင့်အင်း မပေးပါဘူး ကိုယ့်ဘာပေးမလဲပဲ စိတ်ဝင်စားတယ် :)
->ပြောမဖြစ်ပါဘူးလေ စာဖတ်လာတဲ့သူတွေ သိကုန်မှာပေါ့ ဟိ။
->မီရှိပါဘူးလေ၊ စကားမစပ် ကင်ချုံကီလည်း မရှိတော့ဘူး။
->လည်တာ ပတ်တာတော့ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ စရိတ်ခံမယ့်သူရှိရင်ပေါ့လေ။
သီးသန့်နေရာဆိုတာကတော့ ငလျင်မလှုပ်နိုင်မယ့်နေရာ၊ ဆူနာမီ မဖြစ်မယ့်နေရာ၊ ဗုံးမပေါက်မယ့် နေရာ၊ မီးတောင်မပေါက်မယ့်နေရာ၊ တောင်မပြိုတဲ့နေရာ စတဲ့စတဲ့ နေရာတွေပါပဲ။
->ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အိပ်ယာထဲမှာ ချပြီး၊ အိပ်ယာကနေ ထလာတော့ မေ့သွားတယ်၊ ဒါနဲ့ ပြန်အိပ်လိုက်ပါတယ်။
->ပျိရွယ်စဉ်အချိန်တွေကို လွမ်းမောမိတာပါပဲကွယ် ရွှတ် .....ဖတ်။
->ပိုက်ပိုက်ကုန်တာပေါ့ကွာ အီမေးနဲ့ပဲ ပို့လိုက်တာပေါ့။
->ဖြည့်ချင်တာကတော့ ခရစ္စတလ်ကို နှစ်ကူးမှာ ဖိတ်ကျွေးချင်တဲ့သူများရှိနေကြရင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးကို ဖိတ်ကျွေးနိုင်ပါကြောင်း။
အတည်ကြံပါမယ် အဲ့ အတည်ရေးပါ့မယ် :)
->ပျော်ပါတယ်၊ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို ကျောင်းပိတ်ရက်လည်းဖြစ် အမျိုးထဲမှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေရှိတာမို့ သွားလည်ပြီး မုန့်တွေစားခဲ့တာတွေ သတိရမိသေးတယ်။
->ကိုယ်တိုင်တော့ အလှမဆင်ဖူးပါဘူး။ အလှဆင်ထားတာလေးတွေကိုတော့ သဘောကျတယ်ရှင်။
->တောင်ပေါ်မှာ နှင်းဖွေးဖွေးကျတဲ့ ခရစ်မတ်စ်ညလေးကို လွမ်းပါတယ်။
->ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီဇင်ဘာနေ့ရက်တွေကို မြင်ယောင်နေတယ်၊ အရင်အတိုင်းလေ။
->ကိုယ်ပေးတာတွေတော့ မှတ်မထားမိဘူး။ သူများပေးတာတွေပဲ အမှတ်ရနေမိတယ်။
->(ဤမေးခွန်းအရောက်တွင် အကြာကြီး စဉ်းစားလေသည်၊ စာစီခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။)
->အများအားဖြင့် မိသားစုနဲ့အတူ နှစ်ကူးကို ကြိုဆိုလို့ ပျော်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေ့ရက်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုနှစ်တွေမှာတော့ ဘေးနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိလို့ စောစောအိပ်ပါတယ်။
->တီးလုံးသံလေးကို နားဆင်ရင်း ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ နှစ်ကူးကို စောင့်မလားလို့။
->ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့ ချနေတာပါပဲ။ အကောင်အထည်လည်း ဖေါ်နေဆဲပါပဲ။
ငှက်တွေက ပျံရင်းနဲ့ သေ၊ လူဆိုတာ ကြံရင်းနဲ့ သေတဲ့ အမျိုးပေကိုး။
->ရှိပါတယ်။ စိတ်ရော လူရော အားရင် ပိုပြီး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ် :)
ဒီနှစ်တော့ ခင်မင်ရတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်ကို ဂျပန်ယပ်တောင်လှလှလေးတွေ ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ အထုပ်ကို ပေးဖို့ သွားတုန်း လမ်းမှာ ဘဏ်ခဏဝင် ဘဏ်နားမှာ အထုပ်တင်ထားခဲ့ပြီး ထွက်လာတော့ မေ့သွားပါတယ်။ အကောင့်ထဲ ငွေအနည်းငယ်ဝင်နေလို့ ဆိုပါတော့ နှစ်ကုန် အတိုးလို့ရေးထားတယ်၊ မများသော ပမာဏပေမယ့် သူများငွေ ကိုယ့်ထဲ မှားဝင်လာသလား စိတ်စောလိုက်တော့ (စိတ်ပူသွားလို့)လက်ဆောင်ထုပ် ပျောက်ပါလေရော။ စိတ်တော့ မကောင်းဘူး။ နောက်တော့ သူများ အေးချမ်းဖို့ ပေးမှာဆိုတော့ အခု ပျောက်သွားတာလဲ ပံ့သကူအလှူလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်ယပ်တောင်လေးတွေက ပူတဲ့အခါ ယပ်ခတ်နိုင်သလို နေပူလဲ ထီးမဆောင်းချင်တဲ့ သူများအတွက် နေကာလို့ ရတာပေါ့။ သယ်သွားရတာလဲ ထီးလောက် မလေးဘူးလေ :)
->အပြောင်းအလဲကောင်းလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေ မွေးမြူ ပြောင်းလဲနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုမိပါရဲ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များစွာတုန်းက “ကျောင်းတက်နေတဲ့ ညီမလေးအတွက်”ဆိုပြီး အစ်ကိုပို့ပေးသော ပန်းချီကားချပ် ပိုစ့်ကဒ်လေးကို သတိရသဖြင့် ရိုက်သောပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ တူမလေး ကြီးလာရင် ဆိုပြီး မှန်းဆမြင်ယောင်မိရင်းးးးးး
“မိတ်ဆွေအပေါင်းရဲ့ နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင်မှုအပေါင်း သုခအပေါင်း ငြိမ်းချမ်းမှုအပေါင်းပိုင်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေ”
“တို့တိုင်းပြည်ကြီးလည်း ငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ ခေါင်းဆောင်အပေါင်းလည်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေ”
Posted by Crystal at 12:58 PM 12 comments
တိုလီ ထွာလီ (ဘာသာရေး)
ဒီနေ့ “နတ်တော်လပြည့်နေ့” မှာ ပိုစ့်ရေးဖို့ ကျန်နေသေးတဲ့ အပိုင်းကို ဆက်ရေးဖို့ စိတ်ပါနေတယ်၊ ဥပုသ်သီလ လည်း မကျိုးတော့ဘူးပေါ့။ တိုလီ ထွာလီ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ရေးဖြစ်တာကတော့ ရေးမယ့် အပိုင်းအစတိုထွာလေးတွေ စုစည်းထားပြီး ပစ်မှတ်ကတော့ တစ်ခုတည်းပါပဲ..... :)
One day Prince Siddhattha went into the garden and saw the four sighs of an old man,aman afflicted withaloath some,acorpse, and an ascetic. He appreciated the last one.(ပိုစ့်ကဒ်မှာပါတဲ့ စာသားလေးဖြစ်ပါတယ်။)
ဘဝမှာ အစစ ပြည့်စုံသော ချမ်းသာမျိုးစုံကို ခံစား စံစားနေသူအဖို့ ဒီလို ခံစားမှုရသတွေအပေါ် အီ..တောက် လာတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ဖြစ်နေချိန် ဒီရသတွေနဲ့ မတူတဲ့ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်းဆိုသော နိမိတ်တွေ တွေ့ရသောအခါ ထွက်ပေါက်လမ်းစ တွေ့သွားသူ ဘုရားလောင်း မင်းသား သိဒ္ဓတ္ထ။
အရမ်းကောင်းတဲ့ ထောပတ်သီးဖျော်ရည်၊ ချိုလွန်းလို့ ခါးတဲ့ ဒူးရင်းသီး၊ အရသာကောင်းလှတဲ့ ဒန်ပေါက် ဒီအရသာတွေမှာ အီလွန်းလို့ ဆက်မစားနိုင်ဖြစ်ရတာ၊ ဒါမျိုး ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ မဆီမဆိုင် အလောင်းတော်မင်းသား လောကီစည်းစိမ်မှာ ငြီးငွေ့တာကို သွား သတိရမိသေး။
အောက်တိုဘာလမှာရော နိုဝင်ဘာလမှာပါ အမှတ်မထင် ပြုမိတဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ တော်တော်လေး လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကုသိုလ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အချိန်တိုင်းမှာ ဝမ်းမြောက်နေခဲ့ပါတယ်။ ထိုပီတိတွေက သမာဓိတည်ဖို့ အားပေးတယ်မဟုတ်လား။
အလှူတစ်ခု ပေးလှူပြီးတိုင်း သူများကို ပြောပြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်တိုင် ဘယ်လို ဝမ်းမြောက်ခဲ့တာ
ဘာကြောင့် ဝမ်းမြောက်ရတာ၊ အကြိမ်ကြိမ်ဝမ်းသာနေတာ ဒီလိုပုံစံပေါ်အောင် ပြောနိုင်ရင် ကိုယ်ရော မျှဝေခံရတဲ့သူပါ လိုက်ပါ အတူတကွ ဝမ်းသာနိုင်မယ် ကုသိုလ်ရနိုင်မယ်လေ၊ ဟုတ်ဘူးလား။
ဒီမှာ ကုသိုလ်ဟေ့ အမျှ ယူလိုက်ဆိုတာကတော့ သာဓုသာ ခေါ်လိုက်တာ ဝါးတားတားဖြစ်နေတယ်
စိတ်မှာ တက်ကြွမှုမပါတော့ ကုသိုလ်ဝမ်းမြောက်မှုက လျော့နည်းသွားပါလေရော။
နားထောင်သူအနေနဲ့ သူများကုသိုလ်ကို အလကား လာကြွားနေတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်လိုက်မိရင်လည်း အဟောသိကံဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ပြောတဲ့သူကလည်း ကြွားဝါစိတ် မပါစေရဘူးပေါ့နော်။
ခဲအိုတစ်ယောက် ပို့ပေးတဲ့ ပုံလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်မှာလဲတော့ မသိဘူး။
အောက်တိုဘာလမှာတုန်းက မနက်စောစော မိုးသည်းထဲမှာ ပိဏ္ဍပတ်ဆွမ်း ဆွမ်းလောင်းရတာကို သိပ်စိတ်ချမ်းသာခဲ့တယ်။ ငယ်စဉ်က အဖေနဲ့အတူ ဆွမ်းလောင်းဖူးတဲ့ နံနက်ခင်းဆီ စိတ်တွေ ရောက်လို့။
မုန့်လုံးရေပေါ်မှာ အုန်းသီးမပါတာကတော့ available မဖြစ်လို့ မှတ်ကြပါကုန်။
ပုံထဲမယ် ဇွန်းတွေ ဘယ်ညာလွဲနေတာလည်း mirror ကို ရွေးလိုက်တာ အဲလိုဖြစ်သွားပါတယ် :(
မုန့်လုံးရေပေါ် ကပ်လှူထားပါတယ်။ ကပ်ဘေးဆိုက်ရင် မုန့်လုံးရေပေါ်လှူရတယ်လို့ စာထဲ ဖတ်မိတာလား၊ ငယ်ငယ်က သူများပြောတာ ကြားဖူးထားတာလားမသိပါဘူး၊ ထိုင်းမှာ ရေကြီးနေချိန်နဲ့ တိုးနေတုန်း-ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ဒါက တစ်ချက်ပေါ့။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ငွေနစ်မြုပ်မှုရှိနေရင် ငွေပေါ်အောင် စနေနေ့မနက်မှာ မုန့်လုံးရေပေါ် အလုံး(၂၀) လှူရတယ်တဲ့။ ဒါကတော့ စာရေးဆရာသက်နှင်းဆွေ ပြောထားတာလေးပါ။
နောက်ဆုံးအဓိကအချက်ကတာ့ မုန့်လုံးရေပေါ်လုပ်ဖို့ ထိုင်းမှာ မခက်ဘူး အမှုန့်ဝယ်၊ ထန်းညက်ရှိရင် ရပြီ၊
ထန်းညက်ကလည်း ရှိတယ် အမှုန့်ကလည်း ဝယ်ရလွယ်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်လည်းစားချင်တယ်
မြတ်စွာဘုရားကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော မုန့်ဆွမ်းကပ်လှူချင်စိတ်လည်း ဖြစ်နေတယ် ဒါတွေစုပေါင်းပြီး မုန့်လုံးရေပေါ်လှူဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပထမဆုံးကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာလည်း ဆွမ်းတော်ကပ်ပါတယ်၊ ထောပတ်ထမင်းနဲ့ သစ်သီးဆွမ်း၊ ရှင်ဥပဂုတ်ကိုယ်တော်ကို ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ လပြည့်နေ့နဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တိုက်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှဒေသကို ဆွမ်းခံကြွတယ်လို့ ဘာသာရေး မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ (ရှင်ဥပဂုတ်ကိုယ်တော် တကယ်ရှိတယ်လို့ မရှိဘူးဆိုတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်များ ရေးထားတဲ့ စာတွေလည်း ဖတ်ဖူးတယ်၊ ရေးတဲ့ ကိုယ်တော်က ဘယ်လိုကိုယ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး မိမိဖာသာ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်)။ ဒီတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် “သံဃဿ ဒေမ” သံဃာတော်မြတ်များ၏ ကျေးဇူးကိုရည်မှန်း လှူဒါန်းပါ၏လို့ အာရုံပြုလှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့က ထူးခြားတာလေး တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ရေစကြီးချိန်မို့ ဈေးထဲမှာ သစ်သီးတွေ ရှားကုန်တဲ့ချိန်၊ သစ်သီးလေး သုံးမျိုးနဲ့ ဆွမ်းကပ်လှူရတာမို့ အားငယ်စွာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားအမှုးပြုပြီး သံဃာများကို ဆွမ်းကပ်ပါတယ်၊ မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ပဲ လာအလှူခံပါ့မလားလို့ စိတ်ပူသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဘုရားရှိခိုးရင် တပည့်တော်မကို သနားသဖြင့် အလှူခံကြွပေးတော်မူပါလို့ အားငယ်ငယ်နဲ့ လျှောက်ပါတယ်။ အဓိဋ္ဌာန်လည်း ပြုမိတယ် ဒါနလေး မြောက်တယ်ဆိုရင်လည်း ထူးခြားမှုတစ်ခုခု ထားခဲ့တော်မူပါလို့ တောင်းပန်လျှောက်ထားတယ်။
ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ ဒီလိုလျှောက်ထားတယ်ဆိုတာ မေ့သွားတယ်။ အာရုံတွေက အဲလို။
မနက်သုံးနာရီခွဲလောက်မှာ ဆွမ်းပွဲပြင်ထားတာကို မနက်ခြောက်နာရီလောက်မှာ စွန့်ပါတယ်။
စွန့်တဲ့အချိန် ပန်းကန်ကို လက်လှမ်းယူလိုက်တဲ့အခါ လက်နှစ်ဖက်ခြား အလယ်ကနေ အငွေ့လေးတွေ ပျံ့လွင့်သွားတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အမွှေးတိုင်ထွန်းတာ ငြိမ်းသွားတာ ကြာလှပါပြီ၊ ခြင်ဆေးလည်း မထွန်းထားပါဘူး။ ဘယ်က အငွေ့လဲလို့ တွေးနေတုန်း ဆုတောင်း အဓိဋ္ဌာန်ကို သတိရတော့မှ ဒါနလေး မြောက်သွားပြီဆိုပြီး အဲဒီတော့မှ ဝမ်းသာလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ခြင်း။
(မမြင်ရတဲ့ သူတော်ကောင်းတွေကများ ကောင်းမှုကုသိုလ်အတွက် ကျမကို ဝမ်းသာစေချင်လို့လားမသိ)
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်တုန်းက အမေတို့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်အိမ်မှာ ဆွမ်းတော်မနက်အစောကြီး ထကပ်သေးတယ်။ အပျင်းထူတာတစ်ကြောင်း၊ အမေတို့ လုပ်နေတာပဲဆိုပြီး စိတ်ပေ့ါတာက တစ်ကြောင်း၊ အလုပ်သွားရမှာက တစ်ကြောင်းနဲ့မို့ မနက်စောစော မထဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အမေက လာနိုးပါတယ် ထပြီး ဘုရားရှိခိုးဖို့။ သို့ပေမယ့် ကျမကတော့ ဆက်အိပ်ပါတယ် အဲလိုဖြစ်နေတာ တကယ်မဟုတ်ပါ၊ အိမ်မက်မက်နေတာပါ တကယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ စိတ်က ထင်နေတာ။ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့ အမေက အိမ်ရှေ့မှာ ဘုန်းကြီး ကြွတယ် ထထလို့ လှုပ် နှိုးတယ်၊ ဒါနဲ့ တကယ်ပဲ နိုးလာပြီး ယောင်တောင်တောင်နဲ့ မျက်နှာသစ်ပြီး အမေ ခုနက ဘုန်းကြီးကြွတယ်ဆို ဘယ်မှာလဲလို့ မေးတော့ အမေက မပြောပါဘူးတဲ့။ ဒါဆို သမီးကို ဘာလို့ နှိုးလဲ ဘုန်းကြီးကြွတယ်ဆို လို့ ဆိုတော့ မပြောပါဘူးတဲ့ သူတို့ဖာသာ အိမ်ရှေ့မှာ ဘုရားရှိခိုးနေကြတာတဲ့ ဘယ်သူမှ မနှိုးပါဘူးတဲ့။ ကောင်းရော....
အဲဒါနဲ့ တခုခုပဲဆိုပြီး အိမ်ရှေ့လှမ်းကြည့်တော့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ သပိတ်လွယ်ထားတဲ့ ရဟန်းတစ်ပါး အိမ်ဘက်ကနေ ကျောခိုင်းလို့ ကြွသွားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ မနက် သုံးနာရီမထိုးသေးခင် ဘယ်ဘုန်းဘုန်းကများ ဆွမ်းခံကြွမှာလဲဟင်....။ မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်သေးတယ် မန္တလေးမှာ မနက်အစောကြီး ဆွမ်းခံကြွကြတယ်လေနော်။ တကယ်ကိုယ်တွေ့ လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
နောက် အလှူတစ်ခုကတော့ ထိုင်းကိုလာကြတဲ့ ရဟန်းတော်အားလုံးကို လက်ခံထားတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကထိန်အလှူပါ။ ကထိန်မှာ ဆွမ်းတစ်ဝိုင်းကို ဘတ်(၅၀၀)တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ အလှူခံကောက်တဲ့ ညီမတစ်ယောက်ကို အစ်မ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လိုနေတဲ့နေရာလေး တခုခုရှိရင်ပြော လှူချင်တယ်လို့ ပြောထားတယ် မထင်မှတ်ပဲ ရေတွေကြီး လူတွေ ပြန်သွားလိုက်ကြတာ၊
ကထိန်မှာ လှူမယ့်သူတွေနဲကုန်တယ်။ ဒကာ ဒကာမတွေ ဒုက္ခရောက်တော့ ဘုန်းကြီးတွေ တိုက်ရိုက်ထိခိုက်ကုန်တာပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ ဆွမ်းတစ်ဝိုင်းစာကို လှူဖြစ်လိုက်တယ် တခြားလိုတာတွေထက် လောလောဆယ်မှာ ရဟန်းတော်တွေ ဆွမ်းကိစ္စ အရေးကြီးနေပြီ မဟုတ်လား။
ဆွမ်းကပ်တဲ့နေ့က ငွေကောက်ပြီး သွားလှူပေးတဲ့ ညီမက ဖုန်းဆက်ပြောတယ် သာဓုခေါ်ဖို့။
အိမ်ပြောင်းနေလို့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး၊ မဟုတ်ရင် ကြောင်ဖြူများရှင်နဲ့ အဲ့မှာ ဆုံနေအုံးမယ် :D။ အလှူဓာတ်ပုံတွေ ဒီလင့်လေးမှာ ကြည့်ပါနော်၊ သူများပိုစ့်ကို ခွင့်မတောင်းပဲ လင့်လိုက်ပါတယ် :))
အဲဒီညီမ လှူနေတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ထဲမှာ ဒီနေ့ အလှူထင်တယ်ဆိုပြီး မှန်းပြီး ဒီလိုကုသိုလ်လေးကိုလည်း မနက်စောစောဘုရားရှိခိုးတုန်းက အမျှဝေနေမိသေးတယ်။
အမှတ်မထင်လှူဖြစ်တာကတော့ ဓမ္မကထိကဆရာတော်နှစ်ပါးနဲ့ လက်ထောက်သံဃာတစ်ပါး အားလုံးသုံးပါးကို နေ့ဆွမ်း (လူအနည်းငယ်ရှင်းပြီး စားသောက်ဖွယ်များ အစပ်များခြင်းကို ရှောင်လိုသောကြောင့် လေဆိပ်က ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှ ကပ်လှူဖြစ်ခဲ့တာပါ။.
နယ်လှည့်ဆရာတော်တွေဟာ ခရီးထွက် တရားဟောရတွေ သိပ်ပင်ပန်းကြပါတယ်။ ဂေါပကမျိုးစုံတို့ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော စေတနာများအကြားမှာ ဆရာတော်တွေ ပင်ပန်းကြရတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သိပ်သတိမထားမိကြဘူး။ ဒါကြောင့် နာမည်ကြီးမှုရဲ့ နောက်မှာ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေ များစွာဆုံးရှုံးကုန်တော့တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနားနေချိန်လေးတွေတော့ သူတို့လည်း လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်တွေနား သွားရင် မေးရ မြန်းရတယ်။ ကိုယ်သွားလို့ သင့်တော်၏ မတော်၏ပေါ့။ ကိုယ်သွားတဲ့အခါ ဆရာတော်တွေ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်လောက်ဘူး၊ တခြားဒကာဒကာမတွေ ရောက်ယှက်ခတ်မနေဘူး၊ ဆရာတော်များကိုလည်း အေးဆေး လျှောက်ထား ပြောဆိုခွင့်ရမှ သွားချင်တာ။
ရဟန်းသံဃာတော်တွေနဲ့ ပတ်သက်ဖို့ ကိစ္စတွေ ရှိလာတဲ့အခါ အဘွားကို သတိရတယ် အဘွားနဲ့ အခါပေါင်းများစွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားရတဲ့အတွက် အဘွားဆီက ပညာတွေ တမင် မသင်ပဲ အဘွားရဲ့ အလေ့အထ ရှုမြင်မှုတွေ ကိုယ့်ဆီမှာ ကူးစက်ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
လေဆိပ်မှာ ဆရာတော်တွေကို သွားရောက် ကန်တော့ နှုတ်ဆက်ချိန်မှာ နေ့ဆွမ်းကပ်လှူမယ့်သူ လစ်လပ်နေတာမို့ အလွန်ဝမ်းသာစွာနဲ့ ဒီကုသိုလ်လေးကို ယူဖြစ်ခဲ့တာပါ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ကုသိုလ်မပြုခင် စိတ်မှာ ဘာအရောင်မှ မပါဘူးလို့ သိနေမှ ကုသိုလ်ကို ပြုလိုပါတယ်။ စင်ကြယ်ချင်လို့ပါ။
ကျိုက်ထိုဆရာတော်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဖူးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျိုက်ထိုဆရာတော်အသံက ဖြူးဆရာတော်ကြီးရဲ့ အသံနဲ့ လေယူလေသိမ်းက အစ တူနေတယ်။ ဖြူးဆရာတော်ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာ ဆရာတော်အနား ဆေးရုံမှာ ဘုရားစာရွတ်ပေးခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ဖြူးဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မူသွားတော့မှ ဆရာတော့်တရားတွေ နာယူရင်း ဆရာတော်ကို နှမြောလိုက်တာ။ အပင်ပန်းခံနိုင်လွန်းတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးပါ။
ဒါကြောင့် နယ်လှည့်တရားဟောဆရာတော်များလုံးကို ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ နောင်လာနောက်သားတွေ တရားနာယူခွင့် သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့် အချိန်ပိုရတာပေါ့။
တရားပွဲမတိုင်ခင် စီစဉ်တဲ့အစ်ကိုတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနေကြတော့ တရားပွဲမတိုင်ခင်က အစီအစဉ်တွေ ကျမဆီ ဖုန်းဆက် ပြောကြတာလေး နှစ်ခုကိုပြောပြမယ်နော်။ သူတို့ပြောတာက တစ်ခု၊ ကျမတောင်းဆိုတာ တစ်ခု။ သူတို့ပြောတာက သူတို့တွေ လှူလိုက်ရတဲ့ အလှူငွေတွေက ဆရာတော်ပြန်ပြီး ကုသိုလ်ပြုတဲ့ထဲ ပါသွားမှာဖြစ်လို့ ထပ်ဆင့် ကုသိုလ်တိုးတယ်၊ ဆရာတော်ရဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ့ ဆရာတော် ဘာတွေ လုပ်နေတာလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ပြီး ဆရာတော်ပြုတဲ့ ကုသိုလ်တွေကို တတပ်တအားပါဝင်အားဖြည့်ချင်လို့ တရားပွဲကျင်းပဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အပြင် လူငယ်တွေလည်း ဆရာတော့် သွန်သင်ဆုံးမမှုကို နာယူစေချင်လို့ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ (သီတဂူဆရာတော်ကြီး မိန့်တော်မူသလို ministry သတိရမိတယ်၊ အောက်မှာ ဗီဒီယိုလင့်လေးပေးထားပါတယ်။)
ကျမဘက်က တစ်ခုတော့ အကြံပေးပါရစေ......ရှည်မိသေးတယ်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တဲ့အရေးမှာ စေတနာတွေ ထားတာ ဝမ်းသာနေတာ အားလုံးကောင်းပါတယ် အများနဲ့ လုပ်ရတာမို့ ဦးဆောင်လုပ်ရမယ့်သူတွေမှာ ကျိန်းသေ အနစ်နာခံရမှုတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်ပါတယ် အများအကျိုးကို ကြည့်လို့ အနစ်နာခံလိုစိတ်များထားပြီး အများသဘောကျပဲ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်နိုင်ကြရင်ကောင်းပါမယ်၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုချည်းပဲ အမှန်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို အများအကျိုးဆောင်ရွက်ရာမှာ ပယ်သတ်ထားနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ နယ်လှည့်သာသနာပြု ဓမ္မကထိကဆရာတော်များကို သနားကြဖို့ပါ၊
ဆရာတော်များ မပင်ပန်းပါစေနဲ့၊ ကျန်းမာရေး အထူးအလေးထား ဂရုပြုပေးကြပါလို့ ဒါလေး request လုပ်ပါတယ်။
(တောင်ပိုင်းက ကျွန်းစုတွေမှာ တရားဟောပြီး ဘန်ကောက်လေဆိပ်ကို ပြန်ကြွလာပြီး လေဆိပ်မှာပဲ မြန်မာနိုင်ငံကို
တန်းကြွရမှာဖြစ်ပါတယ်) ခရီးပန်းလာတဲ့ ဆရာတော်တွေ ဒီချိန်မှာ ဆွမ်းသေချာ ဘုန်းနိုင်မှ ဖြစ်မယ် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ကြွမယ့် အချိန်ကလည်း ဆွမ်းချိန်ကျော်သွားမှာကိုး ဒါနဲ့ လူအနည်းငယ်ရှင်းပြီး အစပ်မများတဲ့ ဂျပန်ဆိုင်ပဲ ရွေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဆိုင်မှာ စားပွဲတချို့က သံဃာစဉ်လို အမြင့်လေး ဖြစ်နေတယ် ဒါနဲ့ အဲဒီစားပွဲမှာ သံဃာသုံးပါး နေရာယူကြပြီး ကပ္ပိယဒကာများက အနိမ့်စားပွဲလေးမှာ နေရာယူကြတယ်။
နေ့ဆွမ်းအလှူဒကာမကတော့ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်ယူနေတာမို့ ဆရာတော်များ စားပွဲအနားမှာ လိုတာလေးတွေ လုပ်ပေးရင်းနဲ့ ကုသိုလ်ထပ်ယူပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးတွေကို အခုလို ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်လေးယူဖို့ အခွင့်အရေးက ကိုယ်လိုလူအဖို့ ရခဲပါတယ်။
ပြီးတော့ လိုအပ်နေတဲ့ချိန်မှာ လှူခွင့်ရဖို့ဆိုတာလည်း မလွယ်ပြန်ဘူး။ ဆွမ်းဘုန်းပေးတဲ့အချိန်မှာလည်း ဆရာတော်တွေ တရားဟော ခရီးက အပြန်ခရီးဖြစ်တာမို့ စိတ်ချလက်ချရှိနေတာရော ပင်ပန်းလာတာရောစိတ်လည်း သက်တောင့် သက်သာရှိနေကြလို့ ထင်ပါရဲ့ ဆွမ်းတွေ တော်တော်လေး ဘုန်းပေးကြပါတယ်။ ကိုယ်လှူတဲ့ဆွမ်းကို ဒီလိုဘုန်းပေးတာ မြင်ရတော့ ပိုပြီး တိတ်တိတ်လေး ဝမ်းသာနေပြန်ရော။
ဆရာတော်များကို လေဆိပ်မှာ ကန်တော့တုန်းက ဆုပေးတဲ့အသံမှာ မေတ္တာအားတွေ ပါနေလေရဲ့၊ စိတ်ရဲ့ စွမ်းအင်တွေဟာ စက်ကွင်းတွေလိုပဲ တစ်ယောက်က ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ မေတ္တာကို နောက်တစ်ယောက် ခံယူရတဲ့ချိန်မှာ အေးကနဲ လာငြိတယ်။ ရေထဲ ခဲလုံးပစ်ချလိုက်လို့ ပေါ်တဲ့ လှိုင်းလေးတွေလိုပဲ။
အခုလို ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရှင်းပြလိုက်လို့ စိတ်ထဲမှာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဝမ်းမြောက်တဲ့ စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေလို့ စိတ်ညွှတ်လိုက်ပါတယ်။
စကားမစပ် ဆရာတော်ကြီးများ၏ ကြည်ညိုလေးစားဖွယ်ကောင်းသော သြဝါဒကို နာယူကြည့်ပါအုံး။
ရိုးရိုးလေးတွေးမိတာက စာသင်တိုက်က စာသင်စာချဆရာတော်တွေ ပညာအရာထူးချွန်တဲ့ဆရာတော်ဟာ ဥယျာဉ်မှုးတွေဆိုရင် ဓမ္မကထိကဆရာတော်များကတော့ ပန်းလေးတွေနဲ့ တူမနေဘူးလား။
ဆရာတော် မိန့်ထားတာလေး နားထောင်ကြည့်ပါအုံးနော်။
ကျမ ဘာကို ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတာ သိကြမယ်ထင်ပါတယ် :)
အနာဂတ်ဆိုတာ မသေချာဘူး၊ အတိတ်ဆိုတာ အသုံးမဝင်တော့ဘူး။
ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲ ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ နေတာအကောင်းဆုံး။
(၂၀၁၁)ခုနှစ်ရဲ့ ဒီနောက်ဆုံးပိုစ့်လေးနဲ့ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
“အားလုံး အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းကြပါစေ”
Posted by Crystal at 5:17 PM 15 comments
Labels: Bliss, For life notes..., လူထုအရေး
ရေကြီးထားလို့ ဆိပ်ခံတံတားလေး မခိုင့်တခိုင်ပေါ် စွန့်စွန့်စားစား ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်း
ငှက်လေး နှစ်ကောင် အစာလာတောင်းတာပါ။
ငှက်အစာဝယ်ဖို့ အကြွေရှာတယ် မတွေ့ဘူး။ အကြွေအိတ်လေး ကားပေါ်ကျန်ခဲ့တယ်။
အကြွေရှိမှ ဝယ်လို့ရတယ် အစာလေးတွေ စက်နဲ့ ထုတ်ယူမှ ရတယ်။
ကျွေးချင်သူလည်းရှိပါရဲ့၊ အစာတောင်းသူလည်း ရှိတယ်
တွေးကြည့်မိတယ် ပေးလိုတိုင်းလည်း ပေးလို့မရပါလား
ကျမရဲ့ အချစ်တော်လေးတွေပေါ့။ အိမ်မှာ မမွေးနိုင်ပေမယ့် တွေ့တဲ့နေရာတိုင်း သူတို့အနားသွားတယ်။ သူတို့ နားလည်နိုင်မယ့် သီအိုရီလေးတွေနဲ့ ကွန်မြူနီကိတ်လုပ်တယ်၊ ဒီတော့ သူတို့ ဒီလိုလေး ပြန်ချွဲတယ် :)))
မေတ္တာစစ်ရဲ့ သဘောကို သင်ဘယ်လိုနားလည်ပါသလဲ
ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ ကြောင်မလေး ဇီးတော်တော်နဲ့ မတင်ဘူး။ ဘယ်တင်မလဲ ဆော့လိုက်တာ ဗြောင်းဆန်လို့။
တနေ့တော့ အစ်မရဲ့ သူငယ်ချင်း တိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ရောက်လာတယ်။
အစ်ကိုကြီး သမီးကြောင်မလေးကို ကလေးရအောင် လုပ်ပေးပါ (ခရစ္စတလ်၏ မှန်ကန်သော ရီကွက်စ်)
ဟေ ..........(ဆရာဝန်၏ အာမေဋိတ်)
ဖုန်း ဒိုင်း ခွပ် (ခရစ္စတလ်အား အနားတွင်ရှိသော အစ်ကို အစ်မများ ဝိုင်းဘေကြသံ)
ဟီး ဟီး ဟီး (ဘာမှန်းမသိ အရိုက်ခံလိုက်ရလို့ ခရစ္စတလ် ငိုသည့်အသံ)
အမေ့ရင်ခွင် ခေါင်းခွေ့ဝင် အလွန်အေးချမ်းလှသည်တကား။
ဟဲ့ ကလေးကို ဘာလို့ ရိုက်တာလဲ၊ သူနားမလည်တာကို ရှင်းပြမှပေါ့၊
အသလွတ် အပြစ်တင်တာ ရိုက်နှက်တာ ငါမကြိုက်ဘူး (အမေ့၏ မြည်တွန်တောက်တီးမှု)
(ဖခင်၏ ဆရာဝန်အပေါ် အားတုံ့အားနာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနှင့် သမီးငယ်အား ခွင့်လွှတ်အပြုံး)
ခုနေခါများမှာ ပြန်မရနိုင်တော့သော အရာများဖြစ်ပါတယ်။
သုံးရောင်ခြယ် ကြောင်မကြီး၊ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ သူ့သားသမီးတွေရှိတယ်၊
အိပ်သလိုလိုနဲ့ ကလေးတွေကို အစိုးရိမ်ကြီးစွာဖြင့် စောင့်ရှောက်နေတာ သူ့မျက်လုံးမှာ ပေါ်နေတယ်။
အမေဆိုတာ ဒီလိုပဲ....၊ မိခင်စိတ်ဆိုတာ အဲသလိုပဲ။ မိန်းမတိုင်း ကလေးမမွေးဖူးပေမယ့်လို့
စောင့်ရှောက်တတ်တဲ့ မိခင်စိတ်ဆိုတာ ရှိတယ်။ မမေ့နဲ့။
အနောက်က လမ်းလျှောက်လာတဲ့ စုံတွဲကို လမ်းဖယ်ပေးရင် ရိုက်လိုက်တာ
အစ်မကွန် လက်ရာ မီသွားတယ် မတော်တဆပေါ့နော်။
လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ ရိုက်တယ် ပုံပြန်ကြည့်တော့ မူးထာ
အဖြူရောင်ဆိုတဲ့ အရောင်နှစ်သက်မှုမျိုးတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ရေကြီးထားပေမယ့် မရဲတရဲနဲ့ ရဲရဲတောက် ပွင့်နေရှာတဲ့ မနှင်းဆီ
ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပဲ အန်ခဲ အားတင်းထားနိုင်မှ ဒီလို ပွင့်လန်းနိုင်မှာ။
နယ်ထွက်ရင် ကားအမြင့်နဲ့မှ စိတ်ထဲ စတစ်စဖိုင်းဖြစ်တယ်
ဟိုက်ဝေးလမ်းမှာ စပိများတယ် သူတို့လမ်းတွေက ကောင်းတယ်
ကားသေးရင် ပြိုင်တိုက်ရင်တောင် ကိုယ့်ကားသေးရင် ပြဿနာရှိတယ်။
ဒါကြောင့် လူဘယ်လောက်နဲနဲ ကားအမြင့်နဲ့ပဲ သွားတယ်။
အယုဒ္ဓယထမင်းဆိုင်က တံခါး ရေဝင်သွားတာ တံခါးမှာ အရစ်ဖြစ်နေတယ်တွေ့လား။
ဒီတဆိုင်ပဲ ဖွင့်တယ် ဆိုင်ကောင်းကောင်းဆိုလို့။ ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေ ရေမျှောကမ်းတင်ဖြစ်နေရှာတယ်။
ကြက်တွေ စိတ်ဝင်စားကြတယ်။ မယ်ဆိုင်ရောက်ခဲ့တုန်းက ဘုရားပေါ်မှာ ကြက်တွေတွေ့လို့မေးဖူးတယ်။ ဖြေတဲ့သူ ရှမ်းမလေးက ဘုရင်က ကြက်သိုက်ရောက်သွားလို့ ကိုးကွယ်တာတဲ့။ သမိုင်းသေချာပြန်ကြည့်တယ်၊ ထိုင်းတွေကို မေးကြည့်တော့ ဘုရင်ကို ဆက်သထားတာ။ အဓိဋ္ဌာန်နဲ့။ စီးပွါးကောင်းရင် ကောင်းသလို ကြက်ရုပ်အကောင်းစားတွေ ဆက်သကြတယ်။ သူတို့ဘုရင် ကြက်ကြိုက်လို့ ဆက်သကြတာ။ ဘုရင်ကြိုက်တာ တိုက်ကြက်ဖနော် မှားနေအုံးမယ်။
ရေများ ဝါးမျိုလိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လောက် ခိုင်ခံ့တာဖြစ်စေ ပြိုပျက်ရပြန်တယ်။
“အပျော့က အမာကို အနိုင်ယူတာ”
ပိုစ့်ကို စာတွေ အများကြီးရေးပြီး ပေးချင်တဲ့ မတ်စ်စေ့က လိုရာမရောက်ဖြစ်တာ
ပိုစ့်မှာ ပုံတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲပြပြီး ပေးချင်တဲ့ မတ်စ်စေ့ကို ခပ်တိုတိုလေးပေးတာ
ဘယ်အရာက ထိရောက်မယ်ထင်လဲ ဟင်..........
Posted by Crystal at 9:42 AM 13 comments